Waterfall Banyumala, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Randranon-drano Banyumala
Haavo - 40m
Any amin'ny faritra afovoany avaratry Bali no misy azy, ao amin'ny vohitr'i Vanagiri (Distrika Buleleng). Ny Banyumala dia mipetraka lavitra ny trano atsimo Bali any atsimo (Jimbaran, Kuta, Nusa Dua) ​​ary ny avaratra (Lovina, Singaraja). Sarotra ny hahazoana azy satria tsy dia tsara loatra ny kalitaon'ny lalana mankany amin'ny riaka. Na izany aza, rehefa tonga, dia afaka mankafy tanteraka ny toetra tsara tarehy. Raha tonga eto maraina ianao dia vintana fa tsy hihaona amin'ny olon-kafa.
Banyumala dia riandrano karazana cascade, ny haavony dia manodidina ny 40 m. Ahitana riaka lehibe 2 izay hita amin'ny fotoana rehetra. Saingy misy riandrano maromaro hafa, ny fisian sy ny hamafiny izay isaky ny fotoana voafaritra dia voafaritra amin'ny habetsahan'ny orana sy orambe latsaka tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Eo akaikin'ny tongotra dia misy pisinina, izay manana endrika boribory saika tonga lafatra. Ny savaivon'ity fitahirizana ity dia 20 m, ary ny halaliny dia 2 m. Mangarahara be ny rano ao anatiny, hitanao ny farany ambany. Mety ny manazatra yoga eto, satria ny toerana kely sy milamina voahodidin'ny manodidina milamina dia manampy mifantoka.
Avy amin'ity kamory ity eo am-pototr'i Banyumala dia misy renirano mikoriana. Afaka mandeha amin'izany ianao. Nisy tetezana volotsangana arotsaka miampita ny renirano, izay mitondra mankamin'ny ala matevina sy toerana iray izay ahitany ny faran'ny riandrano. Kely lavitra dia misy tetezana hafa miampita ilay renirano ihany, izay misy birao vitsivitsy.
Ny riandrano dia azo zahana isan'andro isaky ny 7 ka hatramin'ny 18 ora. Vidiny fidirana - 20 000 ropia. Tsy lavitra an'i Banyumala dia misy fiantsonan'ny fiara izay 2 ny vidin'ny fiara nilaozana.
adiresy: Wanagiri, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali 81161, Indonezia
Tapakila fidirana - 20 000 ropia
Fijanonana fiara na bisikileta - 2 000 ropia
Sarin'ny riandrano Banyumala
riandrano Banyumala eo amin'ny sari-tany
Rano Banyumala amin'ny sarintany